Akhrisku Waa Furaha Ilbaxnimada !! |
Akhrisku Waa Furaha Ilbaxnimada !!
Hargeisa(GNN):-Akhrisku waxa uu ka mid yahay afarta xirfad-barasho ee waaweyn, waana midka ugu muhiimsan ee aqoontu ka soo maaxato.
Qormadan kooban waxaan diiradda ku saari doonaa in aan wax ka iftiimiyo sida umadaha adduunku ugu kala duwan yihiin akhriska, faa’iidada akhrisku u leeyahay shaqsiga iyo bulshada iyo innagu bulsho ahaan heerka aynu ka joogno akhriska.
Ugu horayn, haddaan milicsano ummadaha kala gedisan ee caalamkan ku wada nool, innaga oo ka eegayna sooyaalkooda siyaasadeed, dhaqaale, farsamo iyo waliba garaadka aqooneed ee bulsho, waxaa si fudud kuugu muuqanaya sawirro aad u kala duwan oo ku tusaya bulsho kasta halka ay ka joogto arrimahaas.Waana taas ta keentay in adduunkan oo mida iyo dadka ku nool oo Aadam wada dhalay in ay haddana u kala baxaan ummado horumaray, ilbaxnimo leh, waxna gumaysta iyo qaar kale oo dib u dhacay, aqoontoodu hoosayso lana gumaysto.
Haddaba waa makhraati ma doon in Qofka fayoow durbaba ay maskaxdiisa kusoo degdegi su’aasha ah maxaa sababay in umadduhu sidaas u kala duwanaadaan.
Jawaabta oo kooban waa heerka aqoontooda oo kala sareeya.
Waddamada horumaray waa ay ka aqoon, xirfad iyo ilbaxnimo badan yihiin kuwa kale, taasna waxaa kuu caddaynaya heerka ay ka gaadheen culuumta kala duwan iyo wax soosaarkooda.
Waxaad na ogaataa akhriska iyo saxiibkiisa dhabta ah waa qoraalka ee in ay yihiin furaha aqoontan la isku dhaafay. Iyadoo aynu wada ognahay sida ummadaha horumaray uga akhris iyo aqoon badan yihiin kuwa dib udhacay, waxaan tusaale fudud u soo qaadanaynaa war bixin uu sanadkii 2014 daabacay wargayska Mental floss taas oo faraysa umad kasta iyo qof walba oo horumar raadis ah inuu badiyo akhriska.
Waxaan ka soo qaadanaynaa Saddexda waddan ee caalamka ugu akhriska badan iyo inta saacadood ee dadkoodu wax akhriyo toddobaadkii celcelis ahaan.
India = 10 saac, 42 daqiiqo
Thailand = 9 saac, 24 daqiiqo
China = 8 saac
Haddaba akhristaw ma shaki baa kaaga jira in saddexdaas waddan ay horumar xawli ah ku socdaan? Mase ogtahay inay ku jiraan hayaan dheer oo ay ku gaadhayaan umaddaha horumaray? Jawaabta adaan kuu dhaafi!
Haddii aan aragnay sida ummadaha adduunku ugu kala duwan yihiin akhriska in ay wax walba ugu kala duwan yihiin, bal aan wax yar ka idhaahdo faa’iidada akhriska ee qof ahaaneed iyo ta bulsheed.
Ahmiyadda akhrisku uma baahna sharaxaad badan waayo waa sida qorraxda oo kale cid caqli u saaxiibana kama qarsoona waa tay Soomaalidu odhan jirtay “waa baryey Sacabbo laguma qarin karo” oo kale.
Waxaa kale oo iyana kugu filan Diinteena xaniifka ah meeqaamka uu akhrisku ka joogo, iyadoo Quraanka kariim ka ah Eebe SWC ku bilaabay “IQRA” Akhri iyo sidii saxaabadii Rasuulka SCW iyo culimadii hore ee islaamka agtooda uu ka ahaa akhrisku.
Tusaale fiicana, waxaa inoo ah xiligii dawladdii Cabbaasiyiinta halka ay reer Baqdaad ka gaadheen akhriska iyo qoraalka iyo sidii dhalinta caalamku ugu xerayn jireen Baqdaad.
Haddaba haddii aan wax yar ka sheego faa’iidooyinka bulsheed ee qoraalka waxaa ka mida:-
Akhrisku wuxuu kobciyaa garaadka bulshada.
Waa furaha ilbaxnimada iyo aqoonta ee bulsho.
Wuxuu sahlaa isfahanka bulshada iyo isu dulqaadashada iyadoo la kala fikir duwan yahay.
Wuxuuna kobciyaa xirfadaha bulshada iyo dhaqaalohooda.
Sidoo kale akhrisku waxa uu faa’iido balaadhan oo aan la soo koobi karin u leehay akhristaha wax yar haddaan ka xusnana waxaa ka mida:-
Waxa uu kobciyaa garaadka maskaxeed iyo ka aqooneed ee qofka.
Waa furaha xogaha iyo waddooyinka cusub ee lagaga gudbo daruufaha ku meersan
Wuxuu kula wadaagaa aqoon iyo khibrad dad hore oo aadan si kale ku hesheeen.
Waxa uu kor u qaadaa kalsoonida, wuxuuna ku barayaa samaynta fikrado iyo qorsheyaal